Azonao atao izao ny mitsapa ny EMUI 10 amin'ny alalàn'ny lasa "Beta tester" | Androidsis
Azonao atao izao ny mizaha toetra ny EMUI 10 amin'ny alàlan'ny fahatongavanao ho "Beta tester"
Anisan'izany ve ianao tsy afaka miandry ny fahazoana ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasanao? Raha mahatsapa fanahiana ianao rehefa tonga ny rafitra fiasa vaovao, ny iray amin'ireo safidy dia ny manandrana ireo kinova Beta izay navoakan'ny mpanamboatra sasany volana maromaro alohan'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana. Raha izany dia, Huawei dia namoaka ny kinova Beta farany ho an'ny fitaovana sasany MIUI miorina amin'ny Android 10.
Raha ny smartphone Huawei anao dia a Mate 20, P Smart 2019 ary P Smart + 2019 manomboka izao dia azonao atao ny manandrana ny kinova MIUI vaovao. Afaka mahazo fidirana amin'ny Android 10 avy amin'ny Huawei ianao sy ny traikefa alohan'ny olon-kafa rehetra ny fiasa sy ny vaovao momba ny kinova vaovao an'ny rafitra miasa MIUI. Inona no andrasanao?
Raha te hanandrana ny EMUI 10 ianao izao, dia holazainay aminao ny fomba hanaovana izany
Araka ny fantantsika, rehetra mpanamboatra sy mpamolavola azy ireo, alohan'ny hamoahana kinova vaovao an'ny rafitra fiasao, manao fitsapana amin'ireo tena mpampiasa. Amin'izany fomba izany no ahafahan'izy ireo manamarina ireo lesoka ary mahazo tsara kokoa amin'ny fanatsarana hatao. Taona vitsivitsy lasa izay, ity karazana fitsapana ity dia natokana ho an'ny mpampiasa voafantina vitsivitsy fotsiny. Fa amin'ny kinova farany, Hita fa ny mpampiasa mavitrika kokoa dia mampiasa ny kinova andrana, dia vao mainka mandoa ny vokatra farany.
Afaka mizaha toetra EMUI 10 mila manao dingana tsotra vitsivitsy fotsiny ianao. Ary ny zavatra voalohany tsy maintsy hataonao dia misintona fampiharana izay noforonin'i Huawei manokana hanangonana angon-drakitra momba ny traikefa amin'ny fampiasana ireo terminal mampiasa ny kinova Beta. Na dia tokony ho fantatsika aza izany Tsy ho hitantsika ao amin'ny magazay fampiharana Google ity fampiharana ity. Noho izany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny tranonkala Huawei ofisialy isika, na azonao atao ny misintona azy mivantana amin'ny fipihana eto.
Raha vao misintona ny App ary midira amin'ny kaonty Huawei, tsy maintsy misafidy ny safidy ianao "Midira amin'ny tetikasa". Ankehitriny dia tsy maintsy miandry an'i Huawei hanaiky antsika amin'ireo mpampiasa hanandrana ny kinova MIUI 10. farany indrindra isika, fotoana fohy ihany izany ary hamita ireo fangatahana teo aloha mandra-pahaekena ny anay. Rehefa nanaiky izahay ary ao anatin'ny tetikasa dia tsy maintsy manavao ny OS fotsiny izahay toy ny fanavaozana hafa rehetra.
Vita ireo dingana tsotra ireo dia afaka milaza isika fa "mpanandrana" ny kinova andrana ny MIUI 10. Nefa mitandrema, aza mieritreritra fa tsara tarehy loatra ny zava-drehetra. Ny kinova beta dia mazàna tsy milamina ary iharan'ny fianjerana tsy tapaka, matetika na kely kokoa. Miomàna amin'ny reboot tsy ampoizina, manantona ary ireo toe-javatra rehetra mampatahotra antsika rehefa mampiasa telefaona isika. Ka raha manapa-kevitra ny hahazo ilay kinova Beta ianao aza adino ny manao backup. Sahy ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Azonao atao izao ny mizaha toetra ny EMUI 10 amin'ny alàlan'ny fahatongavanao ho "Beta tester"
Surfshark: VPN tsara indrindra ampiasaina amin'ny Android